ရန်ကုန်သားတွေ ရဲ့ Stay Home ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ (ဒါတွေ ကတော့ ဖြစ်မှာပါပဲ) – Let Pan Daily
စပေ ..တွေရမယ်.. စပေ ရွှေယူ မလားရွှေ ငွေယူမလားငွေ (စပယ်ပန်းသည် ရဲ့အော်သံက လှပနေတဲ့အိမ်မက်ကလေးကို အာရုံဦးမှာ လှုတ်နိုးလိုက်ပါပြီ ဟာ အေးလိုက်တာကွာ အဲယားကွန်းက စောင်လေးခြုံပြီးပြန်ကွေးလိုက်အုံးမှ) ပဲ 6:15Am
ပေး….ပြုပ်….နံပြား … ၊ ပေး…ပြုပ်.နံပြား .. (မိန်းမတစ်ယောက် အတွက်တော်တော်လေးကိုစူးရှတဲ့အသံ မဆွေ မေဆွိနဲ့တောင်တူသလိုဘဲ) သူဟာကျွန်တော်ရဲ့နှိုးစက်ပါ ။ 6:45Am
ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များကို လူကြီးမင်းတို့ အိမ်တိုင် ရာရောက် လာရောက်ရောင်းချ ပေးနေပါပြီ။ Non Stop … (ဒီ Hand speaker က recording မဆိုးဘူးပဲ အသံနေအသံထားက အလူခံတွေမှာ အော်ခဲ့ဘူးတဲ့အသံမျိုးနဲ့ အသံဖမ်းထားတာပဲ … ကန်စွန်းရွက်လေးကြော်စားမယ်လို့ ထွက်ကြည့်တာ စပီကာလှည်းက တွန်းပြေးပြေးသွားပါပြီ) 8:45Am
ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ ..သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ ကို လူကြီးမင်းတို့ အိမ်တိုင် ရာရောက် လာရောက်ရောင်းချ ပေးနေပါပြီ ခင်ဗျာ လူကြီးမင်းတို့ အသင့်စားသုံးနိုင်ရန် ငါးနီတူးခြောက်ကြော် ၊ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ငံပြာရည်ကြော်၊ ဆပ်ပြာအဆီဗူးလည်းပါပါတယ် ခင်ဗျာ …. Non Stop …. 1:50 Pm
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ .. ကိုဖိုးဇော်တို့ မိသားစုကလည်း အလှူတော်ငွေ ၅၀၀၀. ကျပ်ကို လှူဒါန်းသွားပါတယ် သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ခင်ဗျ။ ပေး၍ မကုန် လှူ၍ မခန်း ပဒုမ်မ္မာ ရွှေကြာပန်းလို ပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေ။ ကိုဖိုးဇော်တို့ မိသားစုတွေလည်း သိန်း ၁၅၀၀၀. ထီဆုကြီးများ ပေါက်၍ အလှူကြီး အတန်းကြီးများလည်း ပေးလှူ နိုင်ကြပါစေ။ မရှိလို့ မလှူ ၊ မလှူလို့ မရှိ ၊မဖြစ်ရလေအောင် ကျွန်တော်များ ဤနေရာ ၊ဤဌာနကနေပြီးတော့ နိဗ္ဗာန် ကို အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ် . ဘယ်ဘက်က တစ်ဆုပ်ကြဲလို့ ညာဘက်ကလည်း တစ်လှည့် ဝင်နိုင်ကြပါစေ… အိပ်စိတန် ( က္ကိုစ္ဆိတံ ) ပတ် စိတန် တုံချန် ဂလုံဂလွမ်.. (ကြုံးပီဗျာ အိမ်ဘက်ကို ကြည့် ပြီး စပီကာကြီးနဲ့ နိဗ္ဗန်ကို အရောက်ပို့ပါတယ်) ။3:55Pm
အောင်ဘာလေထီ သိန်း (၁၀၀၀) ဆု ပေါက် သည့် ချင်းအမျိုးသားကြီး ဆုငွေ အားလုံး မိန်းမဆီ အပ်မည်ဟုဆို ..